Taariikhda culimadii jamaacadii baardheere | Ashaacira's Blog
Taariikhdu waa tusmada noolasha, cilmiga lagu garto ummadihii hore waxa ay ahaayeen iyo waxa ay soo qabteen. Waxaa noo soo gudbiyey halgan dheerna u soo galey dad qorayaal ah oo kala soo kulmey dhibaatooyin badan. Taariikhdu waxay na bartaa waxyaabihii soo dhacay sida horumarka, dagaalada, ilbaxnimada, akhlaaqda, caadooyinka iyo sababaha ummadaha ay hormaraan amaba waxa dib u dhaca u keena. Taariikhdu waxay kaloo na bartaa culimada waaweyn ee ku xeeldheeraadey diinta iyo culuunta kala duwan sida adabka,siyaasada, fanka iyo heerarkii kala duwanaa ee ay soo mareen.
Somaliya waxay, nasiib darro, ka mid noqotey waddamadii la gummeystey. Gumeysiga immanshihiisa ka hor waxaa Somaliya meelo badan oo ka mid ah ka jirey nidaamyo iyo ismaamul ay dadka Soomaaliyeed sameysteen raalina ka ahaayeen. Nidaamkii gumeysiga markii uu soo gaarey dalka Soomaaliya wuxuu ugu horeen burburiyey nidaamyadaas jirey, wuxuu qasey miisaankii iyo deganaashihiisiisagoo adeegsanaya ”qeybi oo xukun”, wuxuu si aad isugu deyey in uu tirtiroraad taariikheedka dalka Soomaaliya uu lahaa iyo in uu baabi’yo isla markaana duugo meelaha magaca iyo sharafta leh ee dalka iyo dadka Soomaaliya.
Waxaa ayaan darro noqotey iyana in aqoonyahanka Soomaaliyeedqaarkii waqtiyadii xigey lagu barbaariyey falsafadaas, taas oo keentey daneyn la’aan taariikhda Soomaaliyeed waqtigii gumeysiga iyo maamuladii ka dambeeyey. Waxay hal-ku-dhig ka dhigteen wixii uu gumeysiga ka qorey Somaliya .
Dalka Somaliya wuxuu leeyahay taariikh daxal gal ah, halgamaayaal fara badan oo dunida caan ku ah islamarkaana u soo hurey naf, maskax iyo maal dhisida iyo horumarinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaa loo baahanyahay taariikhdaas na bareysa garashada noloshii hore ee dalka iyo dadka Soomaliyeed in la darso.
Noolasha qofka waa mid aad u gaaban marka loo fiiriyo taxanaha noolasha aadamiga ay soo martey sida bilowga miro aruursigii, ugaarsatadii, dhulgoosigii iyo degaanka beraleyda iyo warshadeyntii si loo gaaro horumar iyo barwaaqo.
Taariikhda magaalada Baardhere waa qeyb muhim ah ee taariikhda aan soo xusney ee Soomaliya. Taariikhahaas waaweyn haddii la ururin lahaa si qoraal taxane ah, waxay aad wax ooga tari lahayd kordhinta garaadka ummmada.
Qormadan oo ku saabsan taariikhda Baardhere, beled iyo jameeco ahaanba, waxaan ka arkeyna in ay lehayd xukuumad iyo nidaam suurta geliyey in horumar la gaaro muddo dheer ka hor inta uusan imaan gumeysiga dhulkeena.
Taas oo iyana na tuseysa in ummadda Soomaaliyeed ay lahayd nidaam ismaamul oo xor ah oo ay dadka ka qeybqaataan. Magaalada Baardhere waxayna ka mid tahay degmooyinka ugu faca weyn ee ka
sameysmey gudaha dhulka Somaliya, isla markaana lahaa maamul xor ah oo iyada u gooni ah. Waxay ka tirsaneyd gobolkii loo yaqiiney Jubbada sare [ Alta Jubba] intii ay jireen maamulkii gumeysiga iyo dawladii rayidka ee ka dambeysey.
Waxay ka mid noqotey gobolkii jubada dhexe muddo gaaban, markii xukuumadii militeriga abuurtey gobolo hor leh. Ka dib gobolka Gedo oo isbixin waayey dhaqaale ahaan ayaa lagu kabey. Halkaas ayeyna ka tirsanayd ilaa maamulki militeriga ka burburey.
Magaalada Baardhere waxay ka mid tahay magaalooyinkii Somaliya ugu horreeyey, uguna faca weyn oo laga aasaasey meel ka fog xeebta koonfureed ee dalka Somaliya. Waxay u jirta xeebta Barawe qiyaas dhan 250 km. Juqraafi ahaan Bardhere waxay ku taala inta u dhexeysa 2-3° woqooyi dhulbaraha (lool=latitude) iyo 42-43° (Dhigaha=longtitude). Cimiladeeda waa mid aad u kulul, taas oo u sahlineysa in saanadka oo idil beeraha laga faaideysankaro
marka la istimaalayo waraabka beeraha.
Nasiib darro biyaha oo dhulka ka hooseeya awgeed waxaa adag soo saarka biyaha waraabka beeraha marka aan la isticmalynin matoorka biyaha. Bardhere waxay aad ugu hormarsantahay tacabka beeraha noocyadiisa kala duwan. Beeraha roobka oo laga soo saaro dalagyada intooda badan waa lafdhabarka dhaqaalaha. Waxay si gaar ah ugu caanbaxdey sannadihii dambe basasha iyo tubaakada oo loo iibgeyo gudaha iyo dibedda Somaliya.
Magaalada aasaaskeed wuxuu ahaa baar weyn oo ku yaaley masjidka weyn. Magaca Baardhere wuxuu ka soo jeedaa laba erey oo kala ah baar iyo dheer. Baar waa geed inta badan ka baxa webiyada hareerahooda (magaca laatiinka waa Hyphaene). Baar wuxuu leeyahay manaafacaad badan. Wuxuu dhalaa miro loo yaqaano “khoono”. Khoonada waxay ka koobantahay laf hoose, duf dhexe iyo xuub kore. Marka ay cayriinka tahay waa cagaar, marka ay bislaatana waxay leedahay midab dhiiga.
Khoonada xuubkeeda kore iyo dufka dhexe waa la cunnaa. Waxay leedahay dhadhamo kala duwan sida macaan, qaraar, dhadhanlaaw waxayna ku xirantahay nooca geedka iyo inta geedka webiga u jiro. Lafta hoose (sedka) ku jira waxaa loogu xardhaa xoolaha. Geedka baarka wuxuu bixiyaa laamo iyo caleemo. Dhammaana waxaa lagu dhistaa guryaha. Caleenta dusha ayaa laga saara, xajmigana waxaa laga dhigtaa tiir. Tiirarka baarka oo dhowr ah ayaa inta la isku xiro loo isticmaali jirey in lagaga gudbo webiga laguna rarto alaabta sida doonta, gaar ahaan dhismaha guryahay, waxaana loo yaqaaney Sablo.
Bilowgii lixdanaadkii waxaa fidey ku xadgudub iyo isticmaal xumo. Geedka baarka xajmigiisa iyo laamihiisa marka la xoqo waxaa ka soo baxa dheecaan u eg midabka caanaha oo dhadhankooda macyahay marka ay cusubyihiin. Caanaha baarka waxaa loo yaqaana shalabow, waxayna socodsiiyaan sida la sheego caloosha haddii la cabo marka ay macyihiin. Marka caanahaas meel la dhigo in muddo ah dhadhankooda wuu isbedela, waana lagu sakhraama sida khamrada oo kale.
Ujeedada loo aasaasey magaalada Baardhere waxay ahayd in ay noqoto gole diinta islaamka looga dhaqmo isla markaasna dadka loogu yeero lku dhaqanka iyo fidinta islaamka. Magaalada waxaa la aasaasey laba qarni ka badan muddo laga joogo. Taariikhdu waxay ahayd 1761 sannadka miilaadiyada.
Diinta islaamka mar hore ayey soo gaartey Somaliya, gaar ahaan xeebaha dalka laakiin xoog saameyn ah ma lahayn oo waxaa ka xoog badnaa dhaqannadii diinlaawaha ka harey. Waxaa jirey dhaqamo fusuq ah. Wadaado badan ayaa isku howliyey, dadaalna u galey in ay wax ka beddelaan. Qaarkood ayaa xitaa la qaadey durbaanka si ay u soo jiidtaan.
Waxaase iyana jirey wadaado iyana ku tashadey in ay ka fogaadaan oo isaga haajiraan mar haddii ay wax ka qabanwaayeen. Arrintan waxay rasmi ahaan ugu qornayd oo laga akhriyey kitaab uu qorey Sheikh Cabdiyow “Khitamma bil khayr“, waxaa qoraalkiisa ka mid ahaa “mar haddii aadan fusuq wax ka qaban karin, Illah wuxuu ku amraya in aad isaga haajirtid“. Arrintaas waxay qabsatey culimo badan oo ka guurey xeebaha, gaarsiiyey diinta islaamka gudaha dalka Somaliya. Culimadaas waxaa ka mid ahaa:
1. Sh. Ibrahim Hassan Yabarow -7 days-1190H (1776)
2. Sheikh Ali Dhurre -30 yrs-1220H (1805)
3. Sheikh Abukar Adam Dhurre -24 yrs-1244H (1828)
4. Sheikh Abdulrahman Abayl -7 yrs-1251H (1835)
The giamia of Bardere was burned down in
1831 due to war with Geledi sultanate.
It was suspended for 20 yrsand was
restablished in 1851. -20 yrs-1271H (1855)
5. Sheikh Mohamed Adam Kerow -24 yrs-1295H (1878)
6. Sheikh A/rahman Moh´d Adan -2 yrs -1297H (1880)
7. Sheikh Abdiyow Osmanow -25 yrs-1322H (1904)
8. Sheikh Ibrahim Mohamed Adan -4 yrs-1326H (1908)
9. Sheikh Ali Moallin Muddey -33 yrs-1359H (1940)
10. Sheikh Mohamed Yusuf -20 yrs-1379H (1959)
11. Hagi A/ziz Sh. Ali Moallin -8 yrs-1387H (1967)
12. Sheikh Mursal Malin Aliyow-25 yrs-1412H (1992)
Sheikh Mursal was cruelly murdered on (17th december 1992 at 21:20 local time) by heavily armed militia just days before U.N. troops arrived Bardere town. All his household and valuables left with him by members of the Giamia as safe haven were looted. It is believed that the murder of the Sheikh of the Giamia at this crucial time was orchestrated in an attempt to create leadership vacuum.
13. Sheikh Hirow Moallin Ahmed – has been nominated as a caretaker 1992 – present